Rhythmbox 3.4.5 Inosvika neMeson Switch uye Podcast Kunatsiridza | Linux Addicts
Ndichitarisa kumashure nenguva, ndinorangarira kuti kubva kwangu kubva kuWindows kuenda kuLinux kwanga kusiri nyore. Semuenzaniso, MSN yaive yakashata zvakanyanya, asi yakashanda. Chinhu chakaipisisa chandakasangana nacho ndechekushandisa mamwe mimhanzi inoridza / maraibhurari: Ini ndaifara mushandisi we MediaMonkey, yakanaka kwazvo uye yandakatanga nayo kunakidzwa nekuronga mimhanzi yangu. Pandakaenda kuLinux, murairidzi wangu akakurudzira AmaroK, asi kwandiri zvakatonyanya kundivhiringa. Mumwe mutambi anoshandiswa zvakanyanya paLinux ndiye anouya nekusarudzika muUbuntu uye mamwe maGNOME distros, uye mutambi uyu akagadziridzwa nhasi kuti. Rhythmbox 3.4.5.
Rhythmbox 3.4.5 ipfungwa yekuvandudza, uye izvi zvinoratidzwa nekugadzirisa zvipembenene zvakawanikwa mumabasa akasvika mushure mev3.4. Zvose, 40 tsikidzi dzakagadziriswa, akati wandei ekuvandudza ruzivo kana uchiteerera uye kutonga podcasts, asi ivo vakaunzawo maficha matsva, sezvatinogona kuverenga mu. kusunungura chinyorwa.
Chii Chitsva muRhythmbox 3.4.5
Shandura kuMeson kuvaka system.
Yakanyorwazve podcast downloader ine zvirinani tangazve uye edza zvakare.
Inoshandisa podcast episode GUIDs kubata episodhi URL shanduko.
Inochengetedza iyo yekutanga kurongeka kwezvikamu mumapodcasts kunyangwe zvikamu zvine zuva rakafanana rekuburitswa.
Yakabviswa Soundcloud plugin (haisisiri kushanda nekuda kwekurambidzwa kweAPI).
Yakabviswa mmkeys plugin (haichabatsiri).
Iyo DAAP plugin ikozvino inotsigira libdmapsharing 4 API.
Iyo crossfading player backend ikozvino inoshanda zvirinani netiweki hova.
Zvirinani ruzivo rwekufambira mberi kana uchiendesa kune Android kana MTP zvishandiso.
Rhythmbox 3.4.5 yaburitswa masikati ano uye iri kuuya kuFlathub munguva pfupi. Mumazuva mashoma anotevera ichasvika kune zviri pamutemo repositori yeakawanda Linux kugovera. Kune avo vanosarudza mumwe mutambi, unogona kugara uchitarisa pachinyorwa chedu Media Players For GNU/Linux; mapurogiramu akanakisa ekuona mafirimu uye kuteerera mimhanzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Rhythmbox 3.4.5 Inosvika neMeson Switch uye Podcast Improvements
Ezekiel Kuenda akadaro
Uye zvakadini neMediaMonkey muwaini? Nguva yekupedzisira pandakaiisa yakashanda zvakanaka.
Pindura Ezequiel Partida
Zvakanaka, kutaura chokwadi, handiyeuki ndakazviedza kana kuti zvakapesana. Izvo zvinodzokera ku2005-2006, saka handiyeuke kuti ndakazviedza here kana kuti kwete. Ndinoita sendinorangarira ndichishandisa Songbird kana chimwewo chinhu, asi ndiri kunetseka kurangarira. Ndofunga ndakagarawo kuClementine.
Uye ikozvino, zvakanaka, ini handisi kufunga kushandisa WINE kushandisa zvirongwa kune dzimwe nzira. Ini ndinogona kuishandisa yeGuitar Pro, asi kwete yemutambi.
Nimbuspwn, Linux kusagadzikana kwakawanikwa neMicrosoft iyo inogona kupa superuser kodzero